सतीश श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) सतीश श्रेष्ठ
on: १४ श्रावण २०६९, आईतवार ००:०० अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
सिप्रवी सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं २२)
‘घट्दो अवस्थामा शेयर खरीद र बढ्दो अवस्थामा विक्री गर्नुपर्छ’
नयाँ लगानीकर्तालाई यो बजारका बारेमा बुझेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्छु । हल्लाकै भरमा लगानी गर्नुहुँदैन ।
शेयर बजारको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले शेयर बजार सुधारात्मक अवस्थामा छ । नेप्से परिसूचकमा ठूलो उतारचढाव नदेखिए पनि कारोबार रकम वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले बजारमा
लगानीका लागि लगानीकर्ता तयार रहेको बुझाउँछ । केही दिनयता बजार लगभग स्थिर अवस्थामा देखिए पनि सुधारको सङ्केत दिएको छ । यसले नेप्से परिसूचक विगतमा झैं ३ सय अङ्कभन्दा तल झर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सीमित व्यक्तिको चलखेलका कारण शेयर बजारमा सुधार देखिएको भनिन्छ नि, हो ?
यो भनाइसँग म सहमत छैन । बजारमा चलखेल गर्न धेरै पैसा चाहिन्छ । त्यस्ता ठूला लगानीकर्ता (धेरै पैसा भएका) नेपालमा थोरै छन् । यसको अर्थ चलखेल नै नभएको भन्ने पनि होइन । कहींकतै भएको पनि होला । तर, त्यसले शेयर बजार नै प्रभावित भएको भने छैन । अहिले बजारमा ससानो व्यापारबाट पनि ठूलो रकमको कारोबार हुँदै आएको छ । यसले बजार स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा चलेको देखाउँछ ।
बजारमा देखिएको सुधारलाई दीर्घकालसम्म स्थिरता दिन के गर्नुपर्ला ?
यही साउन १ गतेदेखि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीले पनि शेयरको डिम्याट (अभौतिकीकरण) शुरू गरिसकेको छ भने आउँदो ४÷५ महीनाभित्रमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने तयारी पनि गरेको छ । धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीको जमानीमा शेयर खरीद कर्जा प्रदान गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यसैगरी सामूहिक लगानी कोषको विनियमावली र निर्देशिका पनि लागू भइसकेको छ । यसले सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको
सामूहिक लगानी कोष कम्पनी सञ्चालन हुन सहज भएको छ । यी कारणले अझै केही महीना शेयर बजार बुलिश ट्रेण्डमै अघि बढ्ने सम्भावना छ ।
यो सुधारले नेप्से परिसूचकलाई कुन बिन्दुसम्म पुर्‍याउला ?
शेयर बजार बढेर यो (निश्चित तहसम्म) बिन्दुसम्म पुग्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा बजारमा सुधार देखिएकाले त्यही दरको वृद्धिले मात्र निरन्तरता पायो भने कम्तीमा पनि नेप्से ५ सय अङ्कभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाली शेयर बजार राजनीतिबाट पनि प्रभावित हुँदै आएकाले बजार सुधारका लागि मुलुकको राजनीतिमा पनि सुधार आउन जरूरी छ । गत चैत ३१ गते माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन
हुने समाचार सार्वजनिक भएपछि एक्कासि बढ्न शुरू गरेको शेयर बजार संविधान नबन्ने निश्चित भएपछि पुनः घट्न शुरू गरेको थियो । अहिले बजार पुनः बढ्न शुरू गरेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेमा शेयर बजार उच्च बिन्दुमा पुर्‍याउन मद्दत मिल्नेछ ।
अहिले बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिन सकेका छैनन् भनिन्छ नि ?
त्यो सत्य होइन । पछिल्लो समयमा बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएका छन् । शेयर बजारसम्बन्धी बुझेका लगानीकर्ता नेपालमा धेरै कम छन् । यो बजारबाट नाफा प्राप्त गर्न नेप्से घट्दो अवस्थामा शेयर खरीद गर्ने र बढ्दो अवस्थामा विक्री गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा नेप्से परिसूचक बढेको समयमा
शेयर खरीदका लागि लगानीकर्ताको ओइरो लाग्छ भने घटेको समयमा विक्री चाप बढ्दै आएको छ । शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा नभई लगानी गर्न चाहेको कम्पनीबारे राम्रोसँग बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।
यो बजारको विकास तथा विस्तारका लागि स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले कस्तो कदम चालेको छ ?
बजारको विकास तथा विस्तार गर्ने काम हाम्रो होइन । धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीलाई लगानीकर्ताको अर्डरअनुसार शेयरको खरीदविक्री गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरिएको छ । तर पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा एशोसिएशन शेयर बजारसम्बन्धमा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा लगानीकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना पनि एशोसिएशनले बनाएको छ ।
अहिले लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न सकेको अवस्था छ कि छैन ?
नेप्से परिसूचक ३ सय अङ्कभन्दा तल ओर्लिंदा धेरै लगानीकर्ताले नोक्सान बेहोरेका थिए । तर, अहिले नेप्से परिसूचक ४ सय अङ्कभन्दा माथि पुगिसकेको छ । त्यसैले, अहिले अधिकांश पुराना लगानीकर्ताले ‘प्रोफिट बूक’ गरिसकेका छन् भने नयाँ लगानीकर्ता पनि ‘प्रोफिट बूक’ गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
शेयर बजार सुधारका लागि सरकारी प्रयासहरू पर्याप्त छन् ?
यो बजारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । किनकि नेप्से परिसूचक न्यून बिन्दुमा ओर्लिंदासमेत सरकारले बजार सुधार गर्न कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेन । शेयर बजारका लगानीकर्ताले बजार सुधारको प्याकेज ल्याउन पटकपटक आग्रह गरे पनि सरकारी तहबाट सम्बोधन हुन सकेन । सरकारले शेयर खरीद
कर्जाको व्यवस्था गर्ने बताए पनि प्रक्रियागत कठिनाइका कारण अझै शुरू हुन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग हुन सकेको छैन ।
लगानीकर्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नयाँ लगानीकर्तालाई यो बजारका बारेमा बुझेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्छु । हल्लाकै भरमा लगानी गर्नुहुँदैन । लगानी गर्न चाहेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन र पूँजी संरचनालगायत विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न आग्रह गर्छु । आफूसँग जगेडा रहेको रकम
शेयरमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । लगानी गर्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्णय गर्न आग्रह गर्छु ।